Ogaden News Agency (ONA) – Noora Afgaab -Tala bixinadii uu siiyay general Abraham wolde saaxiibkii Cabdi Iley suu u hagaajiyo magaciisa
Noora Afgaab -Tala bixinadii uu siiyay general Abraham wolde saaxiibkii Cabdi Iley suu u hagaajiyo magaciisa
Cabdi iley nidaamkii uu horey ugu caan baxay ahaydna mid lagula soo taliyay markii jagada hogaanka nabadgalyada loo dhiibay ayaa waxay ahayd in afkiisa iyo gacantiisa ay wada socdaan, sidoo kalena aan looga baranin hadal wanaagsan, taasoo dhaqankiisa noqotay. Taladii noocaa ahayd ayaad moodaa in hadda wax iska badaleen, inkasta oy dad xogogaal ihi leeyihiin talooyinka cusub ee la siiyay waxaa sabab u ah isaga iyo saaxiibkii oo rajo xaga siyaasada ah aanay ku sii jirin, talo bixintana wuxuu qaatay un waxa loo yaqaano (image building) Is-xayaysiin. Meesha inta uuna ka tagin hadal waagsan inuu sii gashado bulshada dhexdheeda, inkasta oon anigu leeyahay hadii uu hubo in uu sii joogayo ma dhacdeen inuu ogolaado in uu sifiican u hadlo, waayo wuxuu aaminsan yahay inuu jagada ku haysto hanjabaad iyo cago jugleen iyo cabsi laga cabsanayo iyo dadka oo dareensan in uuna sharci jiran oo uu wuxuu doono ku sameyn karo. Calaakuli xaal talooyinka uu siiyay ninka haga hadda oo ah Abraha Wolde ayaa ahayd sidan. Xusuusin: waxaan ka qodobaynay hadalada qaar laga maqlay Cabdi iley iyo ficilada uu samaynayo hadda.
1. Inuu isku dayo in uu meelaha shirarka ah hadal fiican ku hadlo laakiin ficilkiisa xumi uu halkii kasii socdo. Waxaa loo sheegay inay siyaasad xumo tahay inuu qof masuulihi meel public ah dad masaakiin ah iyo shaqaale ugu hanjabo, sidaa daraadeed inuu mida hadalka iska hagaajiyo, laakiin waano abuurba kawaayn.
2. Inuu warbaahintiisa kafidiyo warar iyo hadal hayn badan maalmahan oo ah in uu ilaalinayo xuquuda aadamaha isagoo raacinaya marwalba inuu horay u adkeyn jiray hadana uu sii xoojinayo hayadaha sharcigana uu caanaan laysla ogyahay ujeediyo. Tusaale ahaan shirkii maalinta dhawayd ee shaqaalaha wuxuu yidhi maxakamaduhu dadkii way dhameeyeen oo way wada xukumeen oo jeel bey ka buuxiyeen iyagoo aniga magac iyo jago igaga doonaya ama iga cabsanaya. Arimahaana waa arimihii hada kahor maxakamadaha, xeer ilaainta iyo cadaalada iyo isagu ay kawada socdeen.
3. Waxaad ku soo celcelisaa waan dhameynay JWXO waana kuwan dadkii ugu danbeeyey ee kasoo xarooday iyo ciidankoodii inta uu soo ururiyo wixii magacaas lagu tuhun sanyahay.
4. Waxaad dhahdaa; Hada waxaa lagaadhay waqtigii sharciga la ilaalin lahaa iyo xuquuda dadka shacabka iyo shaqaalaha intaba.
5. Waxaa kaloo la faray inuu shirar u qabto hayadaha shirciga, shirar kaas oo dhinacna ay miisaniyad ku cunayaan isaga iyo saaxiibkii, dhinacna uu dhahayo waxaa lagala hadlayey inay xuquudada dadka ilaaliyaan hayadaha shircigu. Hadafka ugu weynna waa guud ahaan inuu meesha kasaaro dadka uu isleeyahay sidii aad rabtay meyna wax u xukumin ama u dilin, ama mustaqbalka ayay runta ka sheegi doonaan.
6. Waxaa lagula taliyay inuu dhaqan Xayle Salaase soo celiyo ah inaad loola kulmo odayaal gaar ah oo loo abuurayo inay magac uyaal noqdaan. In odayaasha lasiiyo lacag badan marka lala kulmo, inkasta oo uu Cabdi iley leeyahay macawiso, go’yaal iyo cumaamado ayaan u qaybinayaa.
7. Markay hadlayaan nin la leeyahay wuu soo galay ama nabadbuu qaatay waa inuu soo galiyaa hadalkiisa sifican ayaa la’iila dhaqmay, wax dhibaata ahna la’iguma samaynin.
9. Waxaa lagula taliyay inuu isticmaalo kharash iyo material oo gacanta aad u furo. Gaar ahaan kuwa aqoonleyda ah ee qurbaha jooga iyo odayaasha inuu ka dadaalo.
Dhinaca kale waxaa wali garab case xerada ciidanka kasocda shirkii liyuu booliska iyo booliska caadiga ah iyo waliba xafiisyada hogaanada nabadgalyada, maleeshiyada iyo xeer ilaalinta oo gadaal kaga soo darmaday. Shirkan oyna masuuliyiinta sida hogaanka nabadgalyada iyo kuwo kale oo badani ayna waxba ka ogeeyn ayaa waxaa wada Cabdi iley waxaana ladiyaarinaya xaflad marka uu soo dhamaado loo qabanayo dadkaas inkasta oon wali lasheegin waqtiga oo uu soo dhamaanayo.